Agaasinka Guud ee EGO ee Magaalada Ankara ee Magaalo Weynaha ayaa u diyaarisa kun basas ah oo loo yaqaan '554 basas' kuwaas oo u adeega gaadiidka dadweynaha magaalada ee xaaladaha jiilaalka. 1 Diseembar Kahor dalabka taayirrada jiilaalka ee khasabka ah wuxuu ka bilaabmayaa 2019 [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara, oo tixgelinaysa caafimaadka dadweynaha, ayaa waxay hawlo jeermis-dilis iyo jeermis-ku-qaadis ah ka waddaa basaska EGO ee loogu talagalay muwaadiniinta inay ku safraan deegaan nadiif ah oo nadaafadeed. Dowladda Hoose ee Magaaladda, oo ujeedkeedu yahay in la hubiyo in muwaadiniinta magaaladu ay soo gaadhaan xaalado caafimaad, [More ...]
2 Dayactirka Maalinlaha ah ee Khadka Telefoonka ee Shirkadda "Yenimahalle Şentepe"
Khadadka Xargaha ee Yenimahalle-Sentepe, 3 iyo 4'inci ee u dhexeeya shaqada dayactirka ayaa sii socota, shalay, sababtuna waa shaqada dayactirka mashiinka ee laba maalmood gebi ahaanba la xiray. Ku dhawaaqida bogga rasmiga ah ee Agaasinka Guud ee EGO [More ...]
Shirkada Bakaaraha ee Yenimahalle Sentepe
3 ee khadka tareenka Yenimahalle-Şentepe, kaas oo siiya gaadiid kale oo loogu talagalay muwaadiniinta caasimadda. iyo 4. awood uma yeelan doono inuu adeego muddo bil ah sababtoo ah dayactirka culus ee qorshaysan ee u dhexeeya saldhigyada. Agaasinka Guud ee Ankara ee Magaalada Ankara EGO [More ...]
Agaasinka Guud ee Ankara ee Magaalada Ankara EGO, oo la kulanto qayb badan oo ka mid ah baahiyaha gaadiidka dadweynaha ee caasimadda, ayaa markii ugu horreysay xaqiijisay basaska oo waxaay saxeexeen codsi cusub. Agaasinka Guud ee EGO; naafada ah, waayeelka, uurka iyo [More ...]
Degmooyinka Ankara ee Magaalooyinka, 46 goobo kala gooni ah oo kuyaal dhammaan caasimada iyo 100'e oo laga bilaabay meel u dhaw barta dalabka Wi-Fi ee bilaashka ah ayaa hadda u gudbaya basaska EGO. Duqa Magaalada Ankara Assoc. Dr. Mustafa [More ...]
Helitaanka Abaalmarinta EGO
Ankara Metropolitan Dowlada EGO Agaasime guud, 1. Shir Madaxeedka Nidaamka Gaadiidka Caalamiga ah, Shirkadda waxaa lagu abaal mariyey codsigeeda “Nidaamka Qiimaheynta Smart”. Adigoo raacaya tikniyoolajiyada si dhow, EGO's 1, oo nolosha u fududaysay [More ...]